သောင်းပြောင်းထွေလာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 346
Saw Ngo – Bodaw Sein will retreat in Thagyan
ကာတွန်း စောငို – သူတော်ကောင်းကြီး ဘုိုးတော်စိန် သင်္ကြန်မှာ တရားစခန်းဝင်မည် ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – မိုးမခ၏ သင်္ကြန်အလှပြကား ရန်ကုန်လာမည် ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း – ဝေယံ (တောင်ကြီး) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
အီကြာအော် ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ခက်သေးရွာ၊ ယုန်ကန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးရုံစောင့်အလုပ် လုပ်နေသော တပည့်ကျော် ဖွတ်ကလေးတစ်ယောက် ရှုးရှုးရှဲရှဲဖြင့် သူ့ဆရာ အီကြာအော်ဆီသို့ အပြေးအလွှား ရောက်လာလေတော့သည်။ ဖွတ်ကလေးတစ်ယောက် တော်တော် ဒေါဖောင်းနေပုံရသည်။ အီကြာအော်လည်း ဖွတ်ကလေး ဤသို့ ဒေါသ ထွက်သည်ကို မြင်ခဲသဖြင့် အတော်ကို အံ့သြမိတော့သည်။ “ဟေ့ကောင် ဖွတ်ကလေး မင်းမျက်နှာက မည်းလို့ပါလား၊ အိုးမဲတွေများ ပေနေသလား မသိဘူး” အီကြာအော်က နောက်သည်ကို မသိသော ဖွတ်ကလေးက သူ့မျက်နှာသူ လက်ဖြင့် ပွတ်လေတော့သည်။ “ငါက အလကားနောက်တာပါ ဖွတ်ကလေးရယ်၊ မင်းမျက်နှာက ပုတ်သိုးနေပါလား၊ ဘာဖြစ်လာတာလည်းကွ” “ကျွန်တော်တို့ ယုန်ကန်ဆေးရုံကြီး တစ်ခုလုံး မကျေနပ်ကြဘူး...
ကာတွန်း – ကျော်သူရိန် ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်း ကျော်သူရိန် ဖေ့ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ကယန်းဆိုတာ တိုင်းရင်းသား ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း – ဆလုိုင်းစွမ်းပီ ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Ko Mo Jo – Kayan Ethnics
ပန်းချီ သန်းဌေးမောင် – နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ ကိုကိုကြီး
ပန်းချီ သန်းဌေးမောင် – နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ ကိုကိုကြီး ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၃ (ပန်းချီဆရာကို ဒီကနေ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါ၏၊ မိုးမခမှာ ဖော်ပြခွင့်) Tags: သန်းဌေးမောင် Related posts သန်းဌေးမောင် ● လွမ်းတယ်လို့မှတ် (0) သန်းဌေးမောင် – မေမေကဗျာ (0) သန်းဌေးမောင် – ကိုဌေးကြွယ် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် (0) ပန်းချီသန်းဌေးမောင် ၏ သင်္ကြန် ၂၀၁၄ (0) ပန်းချီသန်းဌေးမောင် – လေထန်ကုန်းကဖီး ငွေရတု အမှတ်တရ (0)
Than Htay Maung – Ko Ko Gyi Cartoon
ပန်းချီ သန်းဌေးမောင် – နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ ကိုကိုကြီး ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၃ (ပန်းချီဆရာကို ဒီကနေ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါ၏၊ မိုးမခမှာ ဖော်ပြခွင့်) No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 346 of 422«1...344345346347348...422»
ကာတွန်း JOKER - ယခင်အစုိုးရနဲ့ ကွာချက်